Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » Airbnb: obodo iri na otu kacha mma na Latin America maka ndị njem US
Njem njem • Akụkọ Aruba Na -agbasa • Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ na -agbasa ozi Colombia • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Airbnb: obodo iri na otu kacha mma na Latin America maka ndị njem US.
Latin America bụ mpaghara juputara n'ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme na nnukwu njem nlegharị anya.
Dabere na data sitere na Airbnb, mpaghara Latin America abụrụla omume maka ndị njem si US.
Latin America na -anọchite anya nhọrọ a na -enweta maka ndị ọbịa North America na -akwụ ọnụ ahịa kwa abalị nke na -erughị $ 150.
Latin America bụ mpaghara juputara n'ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme na nnukwu ebe nlegharị anya nke na afọ ndị na -adịbeghị anya abawanyela n'etiti ndị njem si United States.
Na mgbakwunye, inwe obodo Latino sara mbara, ọ na -abụkarị njem njem na mpaghara iji zụlite ma jigide mmekọrịta ezinụlọ nke dị mkpa taa karịa mgbe ọ bụla.
Dabere na data sitere na Airbnb, Mpaghara Latin America abụrụla ihe na -ewu ewu maka ndị njem si US.
Dabere na ọnụọgụ ọchụchọ emere n'elu ikpo okwu, obodo iri na abụọ kacha ewu ewu na Latin bụ:
A bịa na oge ọkọchị, ebe kachasị ewu ewu bụ osimiri, ọkachasị na Mexico ebe Playa del Carmen na Ensenada nọ na -aga ebe aga na 2021, na -ebili ọnọdụ 6 ma e jiri ya tụnyere 2019, yana Tulum, nke si na nọmba 7 ruo nọmba 3. na ndepụta, dabere na ọnụọgụ ọchụchọ.
Ebe obodo na -apụ apụ na ndepụta, gụnyere Mexico City na Medellín, ha abụọ ghọtara maka onyinye ọdịbendị ha dị elu.
Mpaghara a na -anọchite anya nhọrọ a na -enweta maka ndị ọbịa North America na -akwụ ọnụ ahịa kwa abalị na -erughị $ 150.00.